အာဆငျဝငျဂါးရဲ့ဟောကိနျးက ပေါ့ဘာနဲ့မှ သှေးထှကျအောငျ မှနျကနျခဲ့ပွီလား ? – Sports A2Z
ယူနိုကျတကျကစားသမား ပေါ့ဘာဟာ လာမယျ့ ၂၀၂၂ နှရောသီမှာ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးမှာဖွဈပွီး ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ သူ့ကို အသငျးမှာ ၁ နှဈသကျတမျးသာ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရတော့မှာဖွဈတယျ။ ပေါ့ဘာကို သကျတမျးတိုးဖို့ မရရောမှုတှေ ရှိနပွေီး ဒါတှကေို မီးစပှားထားသူက အေးဂငျြ့ ရှိုငျအိုလာပါ။
သူက ပေါ့ဘာကို ယူနိုကျတကျကနေ ပွနျထုတျခငျြနတေယျ။ ဂြူဗငျတပျဈ သို့ ရီးရဲလျမကျဒရဈဆီ တငျပို့ပွီး အေးဂငျြ့ခ မွိုးမွိုးမွကျမွကျ ဝငျနှိုကျဖို့ စီစဉျနတေယျ။ သူ့ရဲ့ အစီအစဉျက ယူနိုကျတကျနဲ့ ပေါ့ဘာကို စညျးလုံးမှုပွိုကှဲအောငျလုပျတယျ။ ပေါ့ဘာကို အသငျးသဈရှာပေးနတေယျဆိုတဲ့ သှေးထိုးစကားတှကေို နညျးလမျးအသှယျသှယျနဲ့ ပို့တယျ။
ပေါ့ဘာကိုယျတိုငျကလညျး ရှိုငျအိုလာရဲ့စကားတှေ၊ သတငျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဆိတျဆိတျနခေဲ့လို့ ဝနျခံရာရောကျနခေဲ့ပွီးသားဖွဈနတောက ယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေို အတျောလေးစိတျပငျပနျးစခေဲ့တယျ။ ယူနိုကျတကျနညျးပွဆိုးလျရှားကပါ ထငျကွေးတှကေို ဖွရှေငျးဖို့ အားကုနျခံမှာမဟုတျဘူးလို့ ခပျပွတျပွတျတုံ့ပွနျထားခဲ့ရတယျ။
ပေါ့ဘာဟာ အသငျးမှာ တညျငွိမျနကွေောငျး၊ အလုပျလုပျဖို့သာ အာရုံစိုကျနကွေောငျး ပွောဆိုပွီး ပရိသတျတှကေို ပြားရညျနဲ့ဝမျးခထြားရတယျ။ ပေါ့ဘာကို ချေါခဲ့တုနျးက ပေါငျ ၈၉ သနျးဆိုတာ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးစံခြိနျဖွဈခဲ့တယျ။ ယူနိုကျတကျက ငှပေုံကွီး ထုတျသုံးထားပမေယျ့ သူ့ကို ပွနျရောငျးရငျတော့ လကျရှိအခွအေနအေရကို ဈေးကောငျးရဖို့ မလှယျဘူး။
စီးပှားရေးပကျြကပျဆိုကျတာက အသငျးတိုငျးကို အထိနာစခေဲ့တယျ။ သူ့အတှကျ ပေါငျသနျး ၅၀ ဝနျးကငျြသာ ရနိုငျခွရှေိတယျလို့ သိထားရတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့ ယူနိုကျတကျမှာ ထုတျသုံးစရာ ဝှကျဖဲတခကျြတော့ ရှိတယျ။ အဲဒါက ပေါ့ဘာကို စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးတဲ့အထိ အသငျးမှာ စိတျပါလကျပါ ဆကျကစားခိုငျးသှားစဖေို့ပါ။
လကျရှိမှာ ပေါငျသနျး ၅၀ နဲ့ ထုတျရောငျးမလား၊ ဒါမှမဟုတျ ဒီနှဈမှာ အသငျးကို လူအငျအားထပျဖွညျ့ပွီး ပေါ့ဘာပါဝငျတဲ့ တောငျ့တငျးတဲ့လူစာရငျးနဲ့အတူ ၂၀၂၂ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို ဒေါငျးတငျမောငျးတငျ စိနျချေါမလား? ယူနိုကျတကျရဲ့ လကျရှိခွစှေမျးက အတျောလေးအရှိနျရနပွေီ။ ခနျြပီယံဖလားကို စိနျချေါဖို့ ခွစှေမျးအပွငျးဆုံးအသငျးအဖွဈ နောကျတဆငျ့တကျဖို့သာ ကနျြရှိတော့တာဖွဈတယျ။
သူ့ကိုသာ ရောငျးထုတျလိုကျရရငျ ယူနိုကျတကျရဲ့ စညျးလုံးနတေဲ့ ကစားအားနဲ့ အရှိနျတခုက တနျ့သှားမှာဖွဈတယျ။ အဖွတေခုကို ယူနိုကျတကျက လကျတှကေ့ကြ ရှေးရမှာဖွဈတယျ။တကယျလို့သာ ၈ နှဈကွာဝေးကှာနတေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအောငျမွငျမှုသရဖူကို ပွနျလညျခေါငျးဆောငျးနိုငျမယျဆိုရငျ ယူနိုကျတကျအနနေဲ့က အဲဒီအခြိနျမှ ပေါ့ဘာကို အလှတျထှကျခှာခှငျ့ပေးရလညျး နဈနာစရာ မရှိပါဘူးလို့ ထငျမွငျယူဆသူတှေ ရှိလာတယျ။
ဒါက ဆိုးလျရှား၊ အကျဒျဝုဝကျ၊ ဂြှနျမာတာ့ဖျ၊ ဖလကျခြာတို့ စုပေါငျးဖွဆေိုရမယျ့ စာမေးပှဲတရပျဖွဈသလို ဒီပဟဠေိဟာ ယူနိုကျတကျအမွနျဆုံးရှာရမယျ့ အဖွလေညျးဖွဈပါတယျ။
ဂန်ထဝငျနညျးပွကွီး အာဆငျဝငျးဂါးရဲ့ ” အနာဂတျမှာ ဘောလုံးသမားတှဟော စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးတဲ့အထိ အသငျးမှာ ကစားလာကွတာကို တှရေ့လိမျ့မယျ။ အကွောငျးကတော့ ကွီးမွငျ့လာတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးကို ဘယျအသငျးကမှ မပေးခငျြတော့လို့ပဲ” ဆိုတဲ့ ဟောကိနျးက ပေါ့ဘာနဲ့မှ သှေးထှကျအောငျမှနျမလားဆိုတာလညျး ဆကျလကျစိတျဝငျစားစရာပါ။
ယူနိုက်တက်ကစားသမား ပေါ့ဘာဟာ လာမယ့် ၂၀၂၂ နွေရာသီမှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ သူ့ကို အသင်းမှာ ၁ နှစ်သက်တမ်းသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။ ပေါ့ဘာကို သက်တမ်းတိုးဖို့ မရေရာမှုတွေ ရှိနေပြီး ဒါတွေကို မီးစပွားထားသူက အေးဂျင့် ရွိုင်အိုလာပါ။
သူက ပေါ့ဘာကို ယူနိုက်တက်ကနေ ပြန်ထုတ်ချင်နေတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ် သို့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ဆီ တင်ပို့ပြီး အေးဂျင့်ခ မြိုးမြိုးမြက်မြက် ဝင်နှိုက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ သူ့ရဲ့ အစီအစဉ်က ယူနိုက်တက်နဲ့ ပေါ့ဘာကို စည်းလုံးမှုပြိုကွဲအောင်လုပ်တယ်။ ပေါ့ဘာကို အသင်းသစ်ရှာပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ သွေးထိုးစကားတွေကို နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်နဲ့ ပို့တယ်။
ပေါ့ဘာကိုယ်တိုင်ကလည်း ရွိုင်အိုလာရဲ့စကားတွေ၊ သတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိတ်ဆိတ်နေခဲ့လို့ ဝန်ခံရာရောက်နေခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတာက ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေကို အတော်လေးစိတ်ပင်ပန်းစေခဲ့တယ်။ ယူနိုက်တက်နည်းပြဆိုးလ်ရှားကပါ ထင်ကြေးတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အားကုန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်တုံ့ပြန်ထားခဲ့ရတယ်။
ပေါ့ဘာဟာ အသင်းမှာ တည်ငြိမ်နေကြောင်း၊ အလုပ်လုပ်ဖို့သာ အာရုံစိုက်နေကြောင်း ပြောဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို ပျားရည်နဲ့ဝမ်းချထားရတယ်။ ပေါ့ဘာကို ခေါ်ခဲ့တုန်းက ပေါင် ၈၉ သန်းဆိုတာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးစံချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ယူနိုက်တက်က ငွေပုံကြီး ထုတ်သုံးထားပေမယ့် သူ့ကို ပြန်ရောင်းရင်တော့ လက်ရှိအခြေအနေအရကို ဈေးကောင်းရဖို့ မလွယ်ဘူး။
စီးပွားရေးပျက်ကပ်ဆိုက်တာက အသင်းတိုင်းကို အထိနာစေခဲ့တယ်။ သူ့အတွက် ပေါင်သန်း ၅၀ ဝန်းကျင်သာ ရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ သိထားရတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ယူနိုက်တက်မှာ ထုတ်သုံးစရာ ဝှက်ဖဲတချက်တော့ ရှိတယ်။ အဲဒါက ပေါ့ဘာကို စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိ အသင်းမှာ စိတ်ပါလက်ပါ ဆက်ကစားခိုင်းသွားစေဖို့ပါ။
လက်ရှိမှာ ပေါင်သန်း ၅၀ နဲ့ ထုတ်ရောင်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီနှစ်မှာ အသင်းကို လူအင်အားထပ်ဖြည့်ပြီး ပေါ့ဘာပါဝင်တဲ့ တောင့်တင်းတဲ့လူစာရင်းနဲ့အတူ ၂၀၂၂ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ဒေါင်းတင်မောင်းတင် စိန်ခေါ်မလား? ယူနိုက်တက်ရဲ့ လက်ရှိခြေစွမ်းက အတော်လေးအရှိန်ရနေပြီ။ ချန်ပီယံဖလားကို စိန်ခေါ်ဖို့ ခြေစွမ်းအပြင်းဆုံးအသင်းအဖြစ် နောက်တဆင့်တက်ဖို့သာ ကျန်ရှိတော့တာဖြစ်တယ်။
သူ့ကိုသာ ရောင်းထုတ်လိုက်ရရင် ယူနိုက်တက်ရဲ့ စည်းလုံးနေတဲ့ ကစားအားနဲ့ အရှိန်တခုက တန့်သွားမှာဖြစ်တယ်။ အဖြေတခုကို ယူနိုက်တက်က လက်တွေ့ကျကျ ရွေးရမှာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့သာ ၈ နှစ်ကြာဝေးကွာနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အောင်မြင်မှုသရဖူကို ပြန်လည်ခေါင်းဆောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့က အဲဒီအချိန်မှ ပေါ့ဘာကို အလွတ်ထွက်ခွာခွင့်ပေးရလည်း နစ်နာစရာ မရှိပါဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆသူတွေ ရှိလာတယ်။
ဒါက ဆိုးလ်ရှား၊ အက်ဒ်ဝုဝက်၊ ဂျွန်မာတာ့ဖ်၊ ဖလက်ချာတို့ စုပေါင်းဖြေဆိုရမယ့် စာမေးပွဲတရပ်ဖြစ်သလို ဒီပဟေဠိဟာ ယူနိုက်တက်အမြန်ဆုံးရှာရမယ့် အဖြေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂန္ထဝင်နည်းပြကြီး အာဆင်ဝင်းဂါးရဲ့ ” အနာဂတ်မှာ ဘောလုံးသမားတွေဟာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိ အသင်းမှာ ကစားလာကြတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ ကြီးမြင့်လာတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို ဘယ်အသင်းကမှ မပေးချင်တော့လို့ပဲ” ဆိုတဲ့ ဟောကိန်းက ပေါ့ဘာနဲ့မှ သွေးထွက်အောင်မှန်မလားဆိုတာလည်း ဆက်လက်စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဗီနီးရှပျဈ ဘုရငျဖွဈခဲ့တဲ့ နနျးတငျပှဲ နှငျ့အားနိုးလျကို ပညာသငျပေးခဲ့တဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈ 3:1 လီဗာပူးလျပှဲအပွီး ထူးထူးခွားခွား ပွောစရာ7ခကျြ